जीप र मोटरसाइकल ठोक्किँदा २ जनाको ज्यान गयो
चैत्र २७, २०७६ १२:५३:०८
तिब्र गतिमा गुडिरहेको जीप र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको ज्यान गएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका खण्डमा पर्ने बिरेन्द्र बजार नजिकै मंगलबार राति १० बजेतिर स.१०प. ८२५ नम्बरको मोटरसाइकल र ज.१च. १३८१ नम्बरको जीप एक आपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको ज्यान गएको हो ।
मृत्यु हुनेहरुमा सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका ६ का २२ वर्षीय मोटरसाइकल चालक राकेश यादव र पछिल्लो सीटमा सवार सोही वडाका ३२ वर्षीय प्रभास यादव छन् । दुबैको स्थानिय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय शम्भुनाथका प्रहरी निरिक्षक उत्तम कार्कीले जानकारी दिए ।
मृतक दुबैको शव पोष्टमार्टमका लागि गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालमै राखि दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, पुष ८, २०७६, ०३:१२:००